Fanaaniinta Ugu Make Up-ka Qurxoon Kuwa Somalida - Daryeel Magazine
Fanaaniinta Ugu Make Up-ka Qurxoon Kuwa Somalida
Sanadkii tagay oo aynu isku aruurineyno dhacdooyinka iyo wixi xiisaha ka laha ayaan maanta u dooranay fanaanada ugu turukada ama make up qurxan fanaaninta Somalida. Qorayaasha Actor26 ayaa u doortay fanaaniinta hoos ku xusan.
1 Nimco Dareen
Nimca Dareen ayaa had iyo goor si wanaagsan u marsata turukada ayadoon iska badaan markii loo eego fanaaninta kale. Waxeyna marsan midab jirkeeda aan saas looga dareemin taasoo aad soo jiidasho ugu yeesha.
2 Shamsa Foot
Fanaanada Shamsa Foot waxey si aad u qurux badan ayana u marsata turukada waliba midabka ay u doorato xamuurada/rooseeta ay dibnaha marsato ayaa ku caqli gal ah oo kusoo baxa wajigeeda.
3 Kiin Jamac Yare
Fanaanada codka quruxda badan iska leh Kiin Jamac Yare waxey ayana ka mid tahay sadaxda fanaan oo ay kooxda Qurbo Magazine u doorteen iney ka mid noqon karto kuwa sida quruxda badan u marsada turukada. Kiin waxey si lala dhaco u marsata turukada ayadoo in munaasab ah ka isticmaasha kalana taqaan midabkay marsan laheed.
Anagoo wali ku jirna kala saarka iyo doorashada fanaaninta sanadkii tagay ayaanu isbuuca soo socda dooran doona kuwa ugu turuko/makeup xumaa sanadkii tagay. Hoos comment ku dhiib oo sawir wata noona sheeg kuwii ugu turuko xumaa 2014.
Waxyaabaha Ugu Badan Ee Raggu Ay Ku Soo Jiitaan Dumarka 7 Qodob Oo Ay Ku kala Duwan Yihiin Dadka Nolosha Guul Ka Gaara Iyo Kuwa Guuldareysta Sidee Ayaad Kooxdaada/Group-Kaada Ugu Hagi Kartaa Guul